သူမြားလုပျတိုငျးလိုကျလုပျစရာမလိုပါဘူး . . .သူကသူ ကိုယျကကိုယျပါပဲ - Tameelay
သူမြားလုပျတိုငျးလိုကျလုပျစရာမလိုပါဘူး . . .သူကသူ ကိုယျကကိုယျပါပဲ
အားလုံးဟာကိုယျ့ဘဝနဲ့ကိုယျပါပဲ . . .သူမြားသုံးတိုငျး သူမြားဖွုနျးတိုငျး လိုကျမဖွုနျးခငျြပါနဲ့ ။ ကိုယျ့ဘဝကိုယျနားလညျပါ ။
မငျးသမီးတှအေတှကျ အလှအပဟာ သူတို့ရဲ့အဓိကဖွဈတဲ့အတှကျ လှအောငျပွငျမယျ ဈေးကွီးတဲ့အလှကုနျတှသေုံးမယျ ။ ဈေးကွီးတဲ့အဝတျအစားတှဝေတျမယျ ။ အဲ့လိုပွငျတာ ဝတျတာတှဟော သူတို့ကို ဝငျငှတေိုးစတေယျ ။ ကိုယျက သူတို့ကိုအားကပြွီး သူတို့လို သုံးမယျ ဝယျမယျ ဝတျမယျဆိုရငျတော့ စဉျးစားကွညျ့ပေါ့ . . . ကိုယျလှလို့လညျး ဘယျသူမှ ကွျောငွာချေါမရိုကျဘူး ။ ဘယျသူမှ ပိုကျဆံမပေးဘူးလေ . အဓိကနဲ့သာမည ခှဲခွားတတျပါစေ . . .
မငျးသမီးလေး facebook ပျေါ Like တှရေရငျ ကွျောငွာတှေ အပျလို့ ပိုကျဆံတှရေတယျ ။ အဲ့အတှကျ လူကွိုကျမြားမယျ့အရာတှတေငျတယျ ။ တဈခြို့ဆို အဖျောအခြှတျတှတေငျတယျ ။ အဲ့လိုတငျတာ သူတို့ပိုကျဆံရတယျလေ . . .ကွျောငွာအပျရငျ ။ ကိုယျတှေ သူတို့ကို အားကပြွီး အဖျောအခြှတျတှတေငျ ဘယျသူကပိုကျဆံလာပေးမှာလဲ. . . Like တှေ အမြားကွီးရတော့ရော ဘယျသူက ပိုကျဆံလာပေးမှာလဲ . . . ဒါကွောငျ့ အဓိကနဲ့သာမည ခှဲခွားတတျပါစေ . . .
တဈခြို့သူတှကေ သူတို့စီးပှားရေးအတှကျ ပိုကျဆံရလို့ လုပျနခြေိနျမှာ ကိုယျက ငှကေုနျကွေးကခြံပွီး အလကားဖွုနျးမလို့လား . . .ကိုယျ့ဝငျငှတေိုးစမေယျ့နရောတှမှော ရငျးနှီးမွုပျနှံပါ ။
အားလုံးဟာကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်ပါပဲ . . .သူများသုံးတိုင်း သူများဖြုန်းတိုင်း လိုက်မဖြုန်းချင်ပါနဲ့ ။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်နားလည်ပါ ။ မင်းသမီးတွေအတွက် အလှအပဟာ သူတို့ရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက် လှအောင်ပြင်မယ် ဈေးကြီးတဲ့အလှကုန်တွေသုံးမယ် ။ ဈေးကြီးတဲ့အ၀တ်အစားတွေဝတ်မယ် ။ အဲ့လိုပြင်တာ ၀တ်တာတွေဟာ သူတို့ကို ၀င်ငွေတိုးစေတယ် ။ ကိုယ်က သူတို့ကိုအားကျပြီး သူတို့လို သုံးမယ် ၀ယ်မယ် ၀တ်မယ်ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ . . . ကိုယ်လှလို့လည်း ဘယ်သူမှ ကြော်ငြာခေါ်မရိုက်ဘူး ။ ဘယ်သူမှ ပိုက်ဆံမပေးဘူးလေ . အဓိကနဲ့သာမည ခွဲခြားတတ်ပါစေ . . .
မင်းသမီးလေး facebook ပေါ် Like တွေရရင် ကြော်ငြာတွေ အပ်လို့ ပိုက်ဆံတွေရတယ် ။ အဲ့အတွက် လူကြိုက်များမယ့်အရာတွေတင်တယ် ။ တစ်ချို့ဆို အဖော်အချွတ်တွေတင်တယ် ။ အဲ့လိုတင်တာ သူတို့ပိုက်ဆံရတယ်လေ . . .ကြော်ငြာအပ်ရင် ။ ကိုယ်တွေ သူတို့ကို အားကျပြီး အဖော်အချွတ်တွေတင် ဘယ်သူကပိုက်ဆံလာပေးမှာလဲ. . . Like တွေ အများကြီးရတော့ရော ဘယ်သူက ပိုက်ဆံလာပေးမှာလဲ . . . ဒါကြောင့် အဓိကနဲ့သာမည ခွဲခြားတတ်ပါစေ . . .
တစ်ချို့သူတွေက သူတို့စီးပွားရေးအတွက် ပိုက်ဆံရလို့ လုပ်နေချိန်မှာ ကိုယ်က ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး အလကားဖြုန်းမလို့လား . . .ကိုယ့်ဝင်ငွေတိုးစေမယ့်နေရာတွေမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါ ။
Categories Tameelay Knowledge Tags 24, Nay Lin Post navigation
အိမျထောငျရေးမှာ အဆငျပွဖေို့ နားလညျမှုကအရေးကွီးတယျ။